စုလတ်နိုင် မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း - Download Facebook Videos - GenFK.com
FB URL: https://www.facebook.com/စုလတ်နိုင်-မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း-329810740518749/
အလှုတကာကြီး ကိုယ်တိုင်ဆိုအမျိုးတွေက က အကြိုနေ့အမှတ်တရ
ပုသိမ်ကြီးနယ် ကွေ့ကြီးကုန်း(ဂွေးကြီးကုန်း)ကတီးပြန်လာပါပြီ တညတပွဲလိုလိုဖြစ်နေတော့ အချိန်မှီမတင်လိုက်နိုင်ပါဘူးရှင် ဒီ အတီးလေးကတော့ မုံရွာတီးထားတာလေး တင်ချိန်မရလို့ ခုတင်ပေးတာပါရှင်( မပြည့်သောပညာသင်မို့သည်းခံနားထောင်ပေးပါရှင်) ချစ်သောမိသားစုများ ဘဝအမောတွေကင်းဝေကြပါစေရှင်
ဒီတစ်ခါတော့ စုလတ်ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ လွမ်းမြဲလွမ်းဆဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးနော်
အကိုချစ်စု ရေးသားပူဇော်သီဆိုထားသော #သာမဏေဘဝ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သံဃာတော်အရေအတွက် ၅၀၀၀၀ ခန့် လျော့နည်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်အခါ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးအဓွန့်ရှည်တည်တံ့နိုင်ဖို့ရာ သံဃာတော်များနှင့် သာမဏေလေးများကို မိမိတို့ တတ်စွမ်းသ၍ ဝိုင်းဝန်းလှူတန်းထောက်ပံ့ကြပါရန် ဤတေးသီချင်းဗီဒီယိုလေးဖြင့် သာသနာပြုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည် ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ like & share ပြီး အားပေးကြည့်ရှုကြပါဦးနော် . ရင်ထဲမှာ အနှစ်သာရ . တစ်ခုခု ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ ... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ...
မန္တလေး FM တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလေးပါရှင် နားသောတဆင်ပေးကြပါအုံးနော် :-)
#ပါးအို့နီလေးနှင့်ဆီးကြိုမယ် တဲ့ မမရွှေရည်ရဲ့သီချင်းလေး ရှမ်းအကလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် တေးရေး - စန္ဒရားကွန်းဇော် တေးဆို - ရွှေရည်သိန်းတန်
စုလတ် အင်တာဗျူးလေး FM ပုဂံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလေးပါ
မိတ်ဆွေ အမျိုးတွေသီချင်းမို့ အားပေးလိုက်တာပါ နားထောင်ကြည့်ပျော်စရာလေး ကိုချမ်းမြေ့အောင် (ဘိသိက်) ဆိုင်းမင်းသမီလေး မမမြတ်ဆုနိုင် ဆို သရုပ်ဆောင်ထားတာလေးတွေ
မမရွှေရည် သီချင်းလေး အားပေးကြပါအုံး သဝန်တိုတာအပြစ်လား တေးရေး - ရဲထက်အောင် တေးဆို - ရွှေရည်သိန်းတန် ဒါရိုက်တာ - ထင်အောင်လင်း(လင်း)
FM BAGAN မှာ သမီး Interview ခဲ့တာလေးလွှင့်နေတာပါ
FM Bagan မှာ စုလတ် အင်တာဗျူးခဲ့တာလေး လွှင့်နေတာပါ
သမီးကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးပါ #သီတင်းကျွတ်ည သရုပ်ဆောင် - မိုးထက်မြင့် ၊ စုလတ်နိုင် ဒါရိုက်တာ - ထင်အောင်လင်း(လင်း) တေးဂီတ - Mystery အသံဖမ်း - LA studio Mixing - KB စိုးမိုး like & share ပြီး အားပေးကြပါဦးနော်
သူကလေးနော် တေးရေး - ဖြိုးသီဟ တေးဆို - ရွှေရည်သိန်းတန် ရိုက်ကူး - ထင်အောင်လင်း(လင်း)
အားလုံး မျှော်နေကြတဲ့ #နယ်ခြားအလွမ်း တေးရေး - မြင့်ထွန်းမင်း တေးဆို - ဗညားဟန် ၊ စုလတ်နိုင် တေးဂီတ - Mystery အသံဖမ်း - LA studio (mdy) Mixing - KB စိုးမိုး Director - ထင်အောင်လင်း (လင်း)
သံမဏိလိပ်ပြာ တေးရေး - ဖြိုးသီဟ တေးဆို - ရွှေရည်သိန်းတန် ရိုက်ကူး - ထင်အောင်လင်း (လင်း) တည်းဖြတ် - ထင်အောင်လင်း (လင်း)
မှားမယ်နော် သမီး နဲ့ မမရွှေရည် ၂ ယောက်တွဲထွက်ထားတဲ့ #သံမဏိလိပ်ပြာရဲ့နယ်ခြားအလွမ်း စီးရီးထဲက သီချင်းလေးပါ ရေး - သဟာအောင် ဆို - ရွှေရည်သိန်းတန် သရုပ်ဆောင် - နေနော် ၊ အိမ်သစ် ဒါရိုက်တာ - ထင်အောင်လင်း (လင်း)
ကြွယ်တယ် တေးရေး - သဟာအောင် တေးဆို - သဟာအောင် ၊ စု လတ် နိူင် သရုပ်ဆောင် - ကျော်မင်းခန့် ၊ မြတ်နိုး ဒါရိုက်တာ - ထင်အောင်လင်း (လင်း) ဒီသီချင်းလေးထည်းမှာ ရည်းစားစကားပြောနေတဲ့အခါ အရမ်းရှက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်လေးကို အရမ်းကျေနပ်မိသလို သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့မောင်လေးရဲ့ကြိုးစားမှု့ကိုလဲ သဘောကျမိပါတယ် အဲ့ သီချင်းသာ ဆုံးသွားတယ် မထိမတို့ပဲ သီချင်းကပြီးသွားတယ် အားပေးကြပါဦးရှင်